AirPods-ka ayaa sii ahaan doona Apple-ka dhagaha ugu iibinta badan sanadka 2018 | Waxaan ka socdaa mac
AirPods ayaa sii ahaan doona dhagaha dhageystayaasha ugu iibinta badan Apple ee 2018
Waana tan in badan aan sheegaynay in Apple uu helay furaha saxda ah ee sameecadaha dhagaha la '. Sameecadaha dhagaha la galiyay Sebtember sanadkii hore 2016 oo si rasmi ah looga bilaabay suuqa bishii Diseembar ee isla sannadkaas, waxay sii wadaan inay noqdaan maanta mid ka mid ah alaabooyinka ugu kacdoonka badan Apple ee leh ixtiraamka ay u hayaan iPhone-ka.
AirPods waxay sii wadaan inay gurtaan tirooyinka iibka cajiibka ah sida uu sheegayo falanqeeyaha caanka ah Ming-Chi Kuo ee Amniga KGI, sameecadaha dhagaha ayaa ku guuleysan doona tirooyinka iibka ee sareeya sanadka soo socda ee 2018 oo dhan.
Waa sidaas aad ayey u fududahay inaad ku xirto dhagaha sameecadaha noocaan ah Mac, Apple Watch, iPod ama iPhone, in aysan macquul aheyn in qalad lagu sameeyo. Cabirkiisa ka sokow, nidaamka ay u leeyihiin inay ku dalacaan iyo sanduuqa gaadiidka laftiisa waxay ku darsadaan baytari u gaar ah si ay dib ugu buuxiyaan dhagaha dhageysiga haddii loo baahdo, ka dhig sheygan iibiyaha dhabta ah ee ugu fiican. Ogeysiiska Apple ee boggeeda internetka wuxuu ku sharaxayaa qaab fudud oo kooban oo ah waxa aad ku sameyn karto sameecadaha dhagaha la ':
Waxaad ka saareysaa kiiska waxayna horeyba ula shaqeeyaan dhamaan qalabkaaga. Adiga ayaa gashanaya waxayna bilaabayaan inay isla markiiba garaacaan. Waad hadlaysaa oo codkaaga ayaa si cad loo maqlaa. Tani waa sida AirPods u yihiin: fudeyd iyo tiknoolajiyad ku midaysan dhagaha dhagaha oo ah sixir saafi ah
Intaas oo dhan waxaan uga tagnay weedha: «fududaanta iyo tikniyoolajiyadda ku midoobay dhagaha dhagaha» wax run ahaantii run ah oo aad hubaal ku guuleysan doontid qaar ka mid ah isbeddellada sida ugu badan ee suurtagalka ah ee lacag la'aanta ah ee ka soo baxa sanduuqa ee dhagaha dhagaha, guushii kale ee tirooyinka sanadka 2018 sidoo kale uu saadaaliyay falanqeeyaha, Kuo.
Dhibaatada ugu weyn ee AirPod-yadaas had iyo jeer waxay ahayd helitaan, hadda iyadoo kaydku aad u xasilloon yahay waxaan dhihi karnaa sanadkan si wanaagsan ayuu u fiicnaa xagga iibka Iyo haddii saadaasha Kuo aysan fashilmin, waxaa jira hadal heyn u dhaxeysa 26 iyo 28 milyan oo cutubyo ah sanadka 2018. Waan arki doonaa haddii uu saxan yahay iyo in kale dhamaadka sanadka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » AirPods ayaa sii ahaan doona dhagaha dhageystayaasha ugu iibinta badan Apple ee 2018
JIBE, oo ah xeedho badan oo loogu talagalay MacBook iyo MacBook Pro